HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်အစ္စတန်ဘူလ် 24 နာရီအတွက်ဘယ်က Metro နှင့်ဘတ်စ်ကားလိုင်းများ? ..
07 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, Metro, တူရကီ 0
IMM ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğlu 24 နာရီအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကာလကတိပေးကြောင်းလုပ်ရပ်များကနေစတင်ခဲ့သည့်ရွေးကောက်ပွဲကာလ။ အထူးကြပ်မတ်လေ့လာမှုများအထဲကတစ်ခုရလဒ်အဖြစ်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်နှစ်ဦးစလုံးမြေအောက်ရထားလိုင်းများဖော်ထုတ်ခဲ့ကြနှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးအချိန်အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဘတ်စ်ကားလိုင်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဒီတော့ 24 နာရီအစ္စတန်ဘူလ် running မြေအောက်ရထားနှင့်ဘတ်စ်ကားလိုင်းများဘာလဲ
အဖြစ်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ပြင်းထန်သောအချိန်ကတဆင့်နှစ်ဦးစလုံးမီထရိုလိုင်းများကပြဌာန်းခွင့်စဉ်ဆက်မပြတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဘတ်စ်ကားလိုင်းများဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ညဥ့်အခွန်ပုံနှိပ်ကုန်ကျစရိတ်ခရီးသည်နှစ်ဦးကိုခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်, 00.30-05.30 ထံမှတရားဝင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤတွင်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် 24 နာရီမြေအောက်ရထားလိုင်းများဖြစ်ပါတယ်။
Metro ရဲ့ 24 ရာတွင် TIME အလုပ်မှာ?
(- Ataturk လေဆိပ် yenikapi) မှ M1
M1B (yenikapi - Kirazli)
M2 (yenikapi - Hacıosman)
M4 (Kadikoy - Tavşantepe)
M6 (Levent - Boğaziçiတက္ကသိုလ်)
MARMARAY 24 တနင်္ဂနွေနာရီ
ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏အသိပညာများရောက်ရှိပြီးနောက်သောကြာနေ့နှင့်စနေနေ့ညမြေအောက်ရထားနဲ့ချိတ်ဆက် IMM သောကြာနေ့နှင့်စနေနေ့ညအပေါ် 24 နာရီအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်လည်း Marmaray 24 နာရီကိုပေးမည်ခဲ့သညျ။
အချိန်အပြေး 24 ဘတ်စ်ကားလိုင်းများ
နေ့ချင်းညချင်းရှစ်မှတဆင့်လိုင်းအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင် 24 IETT သည့်မက်ထရိုနှင့်အတူပေါင်းစည်းပါလိမ့်မည်။
ညဥ့်အခွန် 00: 30-05: 30 နှင့်2ထုတ်ဝေသည်အထိဤအချိန်ဇုန်အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထံမှအခကြေးငွေအကျိုးအတွက်ပေးဆပ်တဲ့သူခရီးသည်လျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်အမှတ်တံဆိပ်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်မြေအောက်ရထားဘူတာရုံပံ့ပိုးကူညီနေသည် 10 / 07 / 2013 ကမ်ဘာပျေါတှငျပထမဆုံး, မြေအောက်ရထားဘူတာများ၏အမည်များကြော်ငြာယူစတင်နေကြသည်အဖြစ်ဘယ်အမှတ်တံဆိပ်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် Metro မြေအောက်ရထားဘူတာရုံပံ့ပိုးကူညီသည်။ ယင်းမက်ထရိုအတွက်Atatürk-Oto Sanayi ဘူတာရုံ၏ပထမဦးဆုံး M2 Hacıosman-Şişhaneအဆိုပါ dedirtiyor '' မဟုတ်တော့ဖြစ်ပါတယ် '' သောသူတို့အားကြော်ငြာအလုပ်ပြဌာန်း။ အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်အမည်ဖြင့်အသုံးပြုသည် Vodafone ရဲ့ပထမဦးဆုံးပလီကေးရှင်းAtatürk-Oto Sanayi ဘူတာရုံမှဆက်ပြောသည်။ အဆိုပါကြေငြာချက်ဖန်ဆင်းထားသည်အတိုင်း Metro "Atatürk-Oto Sanayi Vodafone ဘူတာ" ရပ်တန့်လိုက်တဲ့အခါ။ ယင်းမက်ထရိုဘူတာရုံထဲမှာကြေငြာချက်ပျဉ်ပြား Vodafone ပြောင်းလဲခဲ့သည်သာ။ Vodafone လည်းလှေကားအင်္ကျီကိုနေရာယူခဲ့ပါတယ်။ M2 မြေအောက်ရထား 230.000 ရက်ပေါင်းထက်ပိုခရီးသည်သယ်ဆောင်။ ပြင်ပမှာလက်မှတ်အရောင်းင်ငွေ ...
ဘယ်တံတား (ဗီဒီယို) ဖြတ်သန်းမည့်ဆိုလိုတယ် 26 / 08 / 2016 တံတားဖြတ်သန်းတံ့သောဆိုလိုတာက: နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Tayyip အာဒိုဂန်, ဥရောပနှင့်အာရှတတိယအကြိမ်ပေါင်းစပ်ကမ္ဘာ့အကျယ်ဆုံးတံတား Yavuz Sultan Selim တံတားသည်ယနေ့ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်။ တံတားဖွင့်ပွဲတတိယမြောက်တံတားအတွက်ရှောက်သွားပါလိမ့်မယ်နဲ့အတူအတန်းအစားမော်တော်ယာဉ်များမှခွဲဝေလိမ့်မည်။ အဲဒီကြေးယခု tools တွေရပါလိမ့်မယ်နဲ့တူရကီအတွက်တံတား ... ကျင်းပခဲ့ပြီးဆွေးနွေးပွဲကိုလည်းတံတားဖြတ်ပြီးအခမဲ့ကျမ်းပိုဒ်တစ်ဦးအနေဖြင့်အာဒိုဂန်ယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားများအတွက်ဘာရိန်းရှင်ဘုရင်၏အဖွင့်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်တက်ရောက်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ Yavuz Sultan Selim တံတားနှင့်မြောက် Ring ကိုအမြန်ဖွင့်လှစ်ပွဲအခမ်းအနားကိုဘာရိန်းဘုရင် Hamad bin ကိုဟေရှာအယ်လ်ခါလီဖာ, ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနား Bakir Izetbegovic ၏နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ, စီဒိုနီယံသမ်မတ Gjorge Ivanov က, TRNC သမ္မတမှ ...
ရထားအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ပိတ်ဖို့ရန်သွားကြသည်ဘယ်ဟာ 28 / 02 / 2013 ဘယ်ရထားအစ္စတန်ဘူလ်အတွက် Yenikapi ပိတ်လိုက်ပါလိမ့်မည် Halkalı အစ္စတန်ဘူလ်မြို့ဆင်ခြေဖုံးမတ်လ6သင်္ဘောမှောက်မှုတစ်ရပ်ကတည်းက 1 2013 လအတွင်း & ရထားလိုင်းပိတ် Halkalı မျက်နှာပြင်မက်ထရိုရထားလိုင်းကိုအသွင်ပြောင်းလအတွင်း6ခိုင်ခိုင်လုံလုံပိတ်ထားရှိနေပါဦးမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်နိုင်ငံသားများအဘို့ဤအခြေအနေကိုဘတ်စ်ကားန်ဆောင်မှုများဒီအခြေအနေကိုဖြေရှင်းရန်နိုင်ရန်အတွက်ဆိတ်ကွယ်ရာ 15 မိနစ်ကျင်းပလိမ့်မည် maduriyet ။ အစ္စတန်ဘူလ်၏နိုင်ငံသားများမှကျွန်ုပ်တို့၏အကြံဉာဏ်ကိုဆက်ဆက်ဖြစ်နိုင်လျှင်နှင့်အစောပိုင်း6လအတွင်းသူတို့ကြိုက်တတ်တဲ့ယာယီရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းများ၎င်းတို့၏နေအိမ်များမှထွက်သင့်လက်လျှင်ပိုက်ဆံကုန်တယ်။ အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ရထားပိတ်လိုက်ပါလိမ့်မည်သည့်? TCDD ရထားဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်စီစဉ်ထား Marmaray စီမံကိန်း၏အောက်တိုဘာလ 29 2013 အတိုင်းအတာအပေါ်ဖွင့်လှစ် ...
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ခရိုင်ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့အခမဲ့အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု 21 / 05 / 2014 အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အခမဲ့အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသောခရိုင်ဖုံးလွှမ်း: သင်ရှာတွေ့မှကြိုးမဲ့ကွန်ရက်များ '' IETT Metrobus '' နာမ၌အခမဲ့အင်တာနက်ပျော်မွေ့နှင့်မျှမတို့ password ကိုလည်းမရှိနှင့်အသုံးပြုသူ၏လိုအပ်ချက်မရှိဘဲသင်၏အခမဲ့အင်တာနက်ကိုခံစားရန်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တစ်ခုတည်းသောအရာ Metrobus ။ အဖြစ်မှတ်အခမဲ့အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးတော်မူလတံ့, Taksim ရင်ပြင်နှင့် Istiklal Caddesi (ဂါလာတာ High School တွင်), Sultanahmet ရင်ပြင်, Eminonu ရင်ပြင်, Besiktas ရင်ပြင်, Kadikoy ရင်ပြင်, Üsküdarရင်ပြင်, Sultanbeyli ရင်ပြင်, Bayezid ရင်ပြင်, Mecidiyeköyရင်ပြင်နှင့် Cevahir တပ်ဦး, Miniatürk / အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ပြန်ကြားရေးတဲ, Sarachane ပန်းခြံ, Emirgan ဝုဒ် , Khedive Pavilion, Aksaray ရင်ပြင်, Bakirkoy ရင်ပြင်, ရင်ပြင်Beylikdüzü, Eyüpရင်ပြင်, လင်းယုန်ရင်ပြင်, ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ...
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် Metro, တနင်္ဂနွေ 24 နာရီအလုပ်လုပ်သင့်တယ် 01 / 09 / 2016 အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် Metro, တနင်္ဂနွေ 24 နာရီအလုပ်လုပ်သင့်တယ်: လန်ဒန်မြေအောက်, 20 သြဂုတ်လတနင်္ဂနွေ 24 နာရီမှစတင်ကတည်းက။ လောလောဆယ်ဤလျှောက်လွှာကိုဗဟိုနှင့်ဗစ်တိုးရီးယားအပါအဝင်ဖန်ဆင်းထားသည်, ဒါပေမယ့်နှစ်ခုသို့မဟုတ် ပို. ပင်လိုင်းများအနာဂတျတှငျထညျ့သှငျးပါလိမ့်မည်။ ညဉ့်ကိုအောမြေအောက်ရထားစတင်ရန်လန်ဒန်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်, နှစ်စဉ်သန်း 18.6 အကြောင်းကိုနိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်တကယ်တော့သွားရောက်လည်ပတ်သောမြို့များ၏စီးပွားရေးကိုခိုင်ခံ့စေဖို့ဆန္ဒတည်ရှိသည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း, လန်ဒန်သွားရောက်လည်ပတ်ခရီးသွားဧည့်, ပျမ်းမျှအဆင့်ကို 15.6 ဘီလီယံကိုပေါင်သုံးစွဲသည်။ စစ်ဆင်ရေး၏ 24 နာရီသို့လန်ဒန်မြေအောက်ရထားလိုင်းကိုအဆိုပါခရီးသွားဧည့်များ၏ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကဝယ်ယူမှုအောင်နှင့်ညဉ့်ဖြုန်းဆက်လက်နိုငျပါလိမျ့မညျ။ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ...
ဘယ်တံတား (ဗီဒီယို) ဖြတ်သန်းမည့်ဆိုလိုတယ်
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်မြေအောက်ရထားလိုင်းများအဘို့စောင့်ဆိုင်းနေသော 2015 အတွက်
144 တစ်နှစ်အမည်ဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနေဖြင့်အစ္စတန်ဘူလ် Photograph အတွက်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏သမိုင်းနှင့်အတူစာအုပ်ဖြစ်ခဲ့သည်
Metro ဘတ်စ်ကားများနှင့်ကူးတို့အစ္စတန်ဘူလ်မနက်စောစော Al-Fitr အခမဲ့အတွက်သို့သော်မလျှော့ချ
19 စက်တင်ဘာလ IETT အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အခမဲ့မိုင်လမ်းရထားမက်ထရိုနှင့်ဘတ်စ်ကား